Daawo muuqaalka: Ergooyinka ka qeyb galaya shirka lagu soo dhisaayo maamulka Jubbaland oo maanta loo soo bandhigay dastuurka cusub ee uu yeelan doono maamulkaasi |
Daawo muuqaalka: Ergooyinka ka qeyb galaya shirka lagu soo dhisaayo maamulka Jubbaland oo maanta loo soo bandhigay dastuurka cusub ee uu yeelan doono maamulkaasi
Waxaa Kismaayo si habsamiya uga socda shirweynaha maamul u samaynta Jubooyinka iyo Gedo,waxaana weli ergooyinka shirkan ka qayb galaya ay ka doodayaan Dastuurka uu yeelanayo maamul goboleedka Jubaland oo ilaa 50-qodob ka kooban.
Shirweynaha maanta ayaa ka duwanaa sidii uu socday maalmihii tegay,sababtoo ah waxaa shirka ku wada sugnaa dhamaan Ergooyinka lagu casumay,waana ta keentay in la guda galo Ajandayaasha shirkan oo uu ugu horeeyo qaybinta Dastuurka oo ka qayb galayaasha loo gudbiyey.
Shirka ayaa maanta waxaa hadalo ka soo jeediyey xubno ka mid ah guddiyada qaabilsan maamulka shirka,siyaasiyiin,xildhibaano,isimo iyo qaybaha kele ee bulshada.
Maxamed Macalin oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada maamul u samaynta Jubaland ayaa guul ku tilmaamay qaabka uu shirku u socdo wuxuuna carabka ku adkeeyey in shirkan uu ka soo baxayo maamul ay ku midaysan yihiin bulshada Jubooyinka iyo Gedo.
Raysalwasaarihii hore ee Somaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isna maanta madasha shirweynaha ka hadlay ayaa u hanbalyey ergooyinka shirka ka qayb-galaya,wuxuuna xusay in xaq u leeyihiin dadka ku nool JUbooyinka iyo Gedo inay maamul dhistaan Jubaland ayuu sheegay in loogu wanqalay maamulka la dhisi doono.
Maamlmaha soo socda ayaa la filayaa inay Dastuurka ansixiyaan ergooyinka shirka,ka dib marka ay ka doodaan.